दोस्रो विश्वयुद्धपछिको विश्कै सबैभन्दा ठुलो संकट ‘सिरिया’ , बिदेशीशक्तिको चक्रव्यूहमा सिरिया ! « Pana Khabar	गृहपृष्ठ
दोस्रो विश्वयुद्धपछिको विश्कै सबैभन्दा ठुलो संकट ‘सिरिया’ , बिदेशीशक्तिको चक्रव्यूहमा सिरिया !
प्रकाशित मिति : Jan 10, 2017	समय : 1:58 pm	पानाखबर	आधा दशकदेखि बलिरहेको सिरिया जसलाई साम्प्रदायिक संघर्षले सक्दैछ र, बमहरू
शिर र सदनमाथि ।
त्यसपछि हुन्छ अलिकति विलम्ब
मौनताको एउटा लघु–विश्राम
प्रयाप्त छ, उद्धारकर्तालाई
मृतक र घाइतेको उद्धार गर्न ।
केवल ‘सहयोग’ को स्वार्थ राख्नेलाई समेत
घाइते पार्दै र मार्दै ।
भयले पक्षघात पार्छ र मार्छ
सकिंदैन अब धेरै बेर पर्खन
एक लघु–मौनता वा विश्रामलाई
सबै विस्फोट र बैरीलाई ।
तिनले भाग्नु छ टाढासम्म
जानु छ धेरै पर
मृत्यु र रक्तस्नानको
जसले सताइरहेको छ तिनको मुलुकलाई
दमनकारीको हातबाट ।
तर, जीवनका लागि लामो संघर्षपश्चात्
के तिनको स्वागतका लागि
कुनै सिमाना खुला छ ?
(फिलिपिनो कवि एलिजावेथ फिडेलो ओडिसनको ‘एलेप्पो, सिरिया’ शीर्षक कविताको भावानुवाद । उनको यो कविता पोइम हन्ट डटकमले गत वर्ष फेब्रुअरीमा ५ मा प्रकाशित गरेको थियो ।)
सायद एलिजावेथ फिडेलोले झन्डै एक वर्षअघि यो कविता लेखिरहँदा एलेप्पो सहर घाइते हुँदो हो । मुलुकभित्र र बाहिरका शक्तिबीच टकरावको मूल्य शिशुहरूले चुकाइरहेका हुँदा हुन् । अनि फिडेलोको मल पग्लिँदो हो र शब्दहरू आँसु बनेर पोखिँदा हुन् । ‘क्रस–कल्चरल’ कार्यकर्ता फिडेलोको मन महसुस गर्न तिनले उतारेका शब्दहरू नै काफी छन् र, त्यसभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण छन्—लाखौं एलेप्पोबासीका दर्दनाक कथा ।
एलेप्पो अहिले पनि तिनको कवितामा जस्तै बम र बारुदसँग बाँचिरहेको छ । शक्ति समूहको स्वार्थका टकरावमा सिरिया आफ्नो ढाड भाँचिरहेको छ । जसका निम्ति बाहिरी मात्र हैन, भित्री शक्तिहरूसमेत आ–आफ्नै स्वार्थको बहकाउमा उद्वेलित छन् ।
सिरिया, जो बनेको छ युद्धको पर्याय । जहा बर्सन्छन् हर दिन बम, गोला र बारुदहरू । भूमध्यसागरीय वायुको प्रभावले अरब भूमि पार गरी मध्यएसिया हुँदै हाम्रै घर आँगनमा हिउँ पार्दै गर्दा, त्यही सागरसँग जोडिएको सिरियामा भने अनिश्चितताको कालो बादल मडारिरहेको छ । अनि ध्वस्त हुँदै छन् हरेक सहरहरू । र, बन्दै छ ‘नर्कको पर्याय’, वानकी मुनले एलेप्पोलाई नर्कको पर्यायवाची भनेझैं ।
द्वन्द्व, युद्ध र गोलाबारुदको पर्याय भएको सिरिया सभ्यताको केन्द्र हो । एलेप्पो, दमास्कसजस्ता सहर विश्व मानव सभ्यताको सुरुवाती स्थानमध्येका हुन् । प्राकृतिक तेलको भण्डारका साथ कसैले सिरियालाई सम्झन्छ भने त्यहाँको पुरातात्त्विक धरोहरका लागि नै सम्झन्छ । भूमध्यसागरको पूर्वी सिमानासँग जोडिएको सिरियाले पश्चिमतर्फ लेबनान र इजराइललाई छुन्छ । उत्तरमा टर्की, पूर्वमा इराक र दक्षिणमा जोर्डनसँग जोडिएको सिरिया समुद्र तटीय पर्वतमालायुक्त सुन्दर मुलुक हो ।
अरब वसन्तको वाछिटा
६ वर्षअघि ट्युनिसियाबाट सुरु भएको अरब वसन्तको वाछिटाले सिरियालाई पनि रुझाउन पुग्यो । विशेष गरी युवाहरू ४० वर्षदेखि निरंकुश सत्ता चलाइरहका बसर अल असद समूहविरुद्ध एकाकार हुन थाले । सामाजिक सञ्जालको उपयोग गर्दै उनीहरूले विश्वभर आफ्नो सन्देश पुर्‍याए । दमास्कसका सडकहरू ‘जनताको इच्छा : निरंकुश शासनको अन्त्य’ को नाराले गुन्जायमान भए । शान्तिपूर्ण रूपमा सुरु भएको असद सत्ताविरुद्धको आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै गयो । असद सरकारले प्रदर्शनकारीमाथि गोलीको वर्षा गर्‍यो । संकटकालीन कानुन लगाएर जनताका सबै अधिकार खोसियो । प्रदर्शन र त्यसमाथिको दमन बढ्दै गयो । घाइते हुने र मारिनेको संख्या उकालो लाग्दै गयो ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि भएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमाथि दमन बढ्दै गएपछि अमेरिकाले सिरियाली सरकारमाथि प्रतिबन्ध घोषणा गर्‍यो । सुरुमा असद र उनको सरकारका ६ अरू उच्च अधिकारीविरुद्ध प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । असद सरकारको दमन शृंखला रोकिएन । त्यसको प्रतिउत्तरमा अमेरिका, युरोप र संयुक्त राष्ट्रसंघ मात्र होइन, उसकै छिमेकी अरब मुलुकहरूसमेत असद सत्ताको विपक्षमा उभिन पुगे । साउदी अरब, बहाराइन, कुवेतले दमास्कसबाट आफ्ना राजदूत फिर्ता बोलाए । अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामाले सिरियामाथिको प्रतिबन्धलाई थप कडा पार्दै अमेरिकामा रहेको सबै सिरियाली सम्पत्ति ‘फ्रिज’ गरे, अमेरिकी कम्पनी र नागरिकलाई सिरिया जान रोक लगाइयो । अमेरिकी प्रतिबन्धसँगै राष्ट्रसंघले सिरियालाई मानवताविरुद्ध अपराध गरेको आरोप लगाउँदै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यो ।
२०११ को अक्टोबरमा सबै प्रतिपक्षीहरू मिलेर सिरियाली राष्ट्रिय परिषद् गठन गरे । उनीहरूको सामूहिक लक्ष्य असदको बहिर्गमन थियो । कुनै बेला सिरियाको निकटतम साझेदार टर्किले परिषद्लाई अनुमोदन गर्दै असद सत्ताविरुद्ध लडिरेहको ‘स्वतन्त्र सिरियाली सेना’ लाई सैन्य क्याम्प चलाउन सहयोग गर्‍यो । नोभेम्बरमा असदले अरब लिगसँग नरसंहार रोक्ने, प्रतिपक्ष्ँसँग वार्ता गर्ने र सडकबाट सेना फिर्ता लिने प्रतिबद्धता जनाए । तर, उनले त्यसविपरीत आक्रमण र नरसंहार बढाउँदै लगे । प्रतिउत्तरमा अरब लिगले संगठनको इतिहासमै पहिलो पटक आफ्नो सदस्यबाट सिरियालाई हटायो । लिगले सिरियामाथि नाकाबन्दी लगायो । साउदी अरबका राजा अब्दुल्लाहले असदलाई तत्कालै आफ्नो कदमबाट पछि हट्न अनुरोधसमेत गरे । यी सबै विकासक्रमलाई असद सरकारले बेवास्ता गर्‍यो ।
सरकारी फौजमा कार्यरत हजारौं सेनासमेत स्वतन्त्र सिरियाली सेनामा प्रवेश गरे । विद्रोहीद्वारा गरिने हमलाले तीव्रता पायो । २०११ को अन्त्यमा राष्ट्रसंघले सिरिया गृहयुद्धमा फस्न लागेको चेतावनी दिएको थियो । सिरियाली सरकारले आफ्ना नागरिकमाथि जारी राखेको दमन र अमानविय कार्य अन्त्य नभए मुलुक पूर्ण गृहयुद्धमा फस्ने उसको निष्कर्ष थियो । राष्ट्रसंघ र अरब लिगको प्रयासका बाबजुद सिरियामा मानवताविरोधी अपराध रोकिएन । युद्ध चर्कंदै गएपछि २०१२ को फेब्रुअरीमा अमेरिकाले सिरियाको दूतावास बन्द गर्‍यो ।
फब्रुअरीमै संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्ले सिरियामा हिंसा अन्त्य र राष्ट्रपति असदलाई सत्ता छाडेर उप–राष्ट्रपतिलाई पद हस्तान्तरण गर्ने एवं सहमतिको सरकार बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो । सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्यमध्ये चीन र रुसले भिटो लगाएर प्रस्ताव पारित हुनबाट रोके । त्यसले सिरिया संकटमा विश्व शक्ति राष्ट्रहरू ध्रुवीकृत छन् भन्ने मात्र देखएन, मानवताका लागि समेत तिनिहरू एक हुँदैनन् भन्ने संकेत गर्‍यो । सुरक्षा परिषद्ले प्रस्ताव पारित गर्न नसकेकै भोलिपल्ट राष्ट्रसंघको महासभामा प्रस्तावकै पक्षमा बहुमत भोट खस्यो । प्रस्तावको पक्षमा १ सय ३७ र विपक्षमा १२ भोट मात्र खसेको थियो । यद्यपि यो बाध्यकारी थिएन, केवल असद सरकारको बेइज्जती मात्र थियो ।
युद्धकै बीच २६ फेब्रुअरी २०१२ म असद सरकारले नयाँ संविधानका लागि जनमतसंग्रहको घोषणा गर्‍यो । ९० प्रतिशतले नयाँ संविधानलाई समर्थन गरेको सिरियाली सरकाले घोषणा गर्‍यो, जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरूले ढोङको संज्ञा दिए । नयाँ संविधानले राष्ट्रपतिका लागि ७–७ वर्षको दुई कार्यकाल तोक्यो ।
मार्चमा राष्ट्रसंघले पूर्वमहासचिव कोफी अन्नानको शान्ति तथा युद्धविरामसम्बन्धी प्रस्तावलाई अघि बढायो । सुरक्षा परिषद्मा भिटो लगाएका चीन र रुसले समेत त्यसमा समर्थन जनाए । असदले समर्थन गरेपछि पहिलो पटक सिरियामा युद्धविराम भयो । तर, युद्धविरामकै बेला हौला भन्ने स्थानमा १ सय १० जना मारिएपछि यसले गति लिन सकेन । असदले आतंककारी हमला भएको बताए भने संयुक्त राष्ट्रसंघले सरकारले निर्दोषलाई मारेको आरोप लगायो ।
अरब वसन्तको वाछिटासँगै बढेको द्वन्द्वले सिरियालाई बिस्तारै गृहयुद्धमा तान्दै लग्यो । नि:शस्त्र नागरिक मारिने क्रम बढ्दै गयो । जुन २०१२ मा राष्ट्रसंघले तथ्य पत्ता लगाउने आफ्नो मिसनसमेत बन्द गर्दै सिरियालाई गृहयुद्धग्रस्त मुलुक घोषणा गर्‍यो । त्यसै महिना सिरियाले टर्कीको सैन्य विमानलाई खसाल्यो । पहिले सिरियाको साझेदार टर्कीले विद्रोहीलाई समर्थन गर्न थाल्यो ।
असदको सत्तामा त्यस बेला हलचल मच्चियो जब जुलाई १८, २०१२ मा राष्ट्रिय सुरक्षा मुख्यालयमै बम खस्यो । मन्त्रीहरू र वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी सामेल बैठकमा बम खसेपछि असदका एकदमै विश्वासिला रक्षामन्त्रीसमेत मारिए । त्यसै महिना सरकारी फौज र विद्रोहीबीच दमास्कस र अलेप्पोमा घमासान लडाइँ भयो । अलेप्पोमा मात्र २ लाखभन्दा बढी घर छाड्न बाध्य भए । सरकारी फौजले देखाएको दमन र क्रूरतालाई विश्वले नै दोस्रो विश्वयुद्धपछिको सबैभन्दा क्रूर कार्यका रूपमा चर्चा गर्‍यो ।
गृहयुद्ध चर्कंदै जाँदा विद्रोही गुरिल्ला समूहमा मुसलमान जिहादी हावी हुँदै गए । अल कायदाले विद्रोहीलाई आर्थिक तथा हतियार सहयोग गर्न थाल्यो । प्रतिपक्षी विद्रोही समूह बिस्तारै सुन्नी अतिवादी समूहको पकडमा पर्न थाल्यो । जसको लडाइँ अब सरकारसँग मात्र सीमित रहेन सिया र सत्तासीन अल्विट समूहविरुद्धसमेत सोझिन थाल्यो ।
असद र उनको समूहले प्रतिनिधित्व गर्ने अल्विट समूह पनि सिया मुसलमानभित्रकै एउटा जातीय समूह हो । जसले सुन्नी बहुल सिरियामा चार दशकअघिदेखि एकछत्र शासन गर्दै आएको छ । सिरिया सरकार र विद्रोहीबीच चर्कंदो युद्धका कारण संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष दूत बनेका कोफी अन्नानले राजीनामा दिए । अगस्ट ६ मा प्रधानमन्त्री रियाद फरिद हिजाव र अरू दुई मन्त्री विद्रोहीलाई समर्थन गर्ने भन्दै जोर्डन पुगे ।
सिरियाको यृहयुद्धले छिमेकीहरूलाई समेत असर गर्न थाल्यो । विशेषगरी टर्कीलाई समस्या पर्दै गयो । टर्कीले सिरियासँग युद्ध नचाहेको तर आफ्नो सीमा सुरक्षाका लागि कुनै कसर बाँकी नराख्ने चेतावनी दियो । साउदी अरब र कतारले विद्रोहीलाई सहयोग गर्न पठाएका हतियार जिहादीका हातमा पर्न थाले । विद्रोहीको कब्जा अतिवादीको हातमा पुगेपछि विद्रोहीले पनि अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन गुमाउने खतरा बढ्दै गयो ।
सरकारविरोधी संघर्षमा रहेका विभिन्न समूहले सिरिया राष्ट्रिय परिषद् गठन गरेका थिए । नोभेम्बर २०१२ मा मुलुकभित्र रहेका युवा नेताहरू मिलेर सिरिया राष्ट्रिय गठबन्धन गठन गरे । यसका नेता शेख अहमद मोज अल खतिबले असदसँग सम्झौता गर्न इच्छुक रहेको बताएका थिए । फ्रान्स र टर्कीले नयाँ समूहलाई तत्कालै मान्यता दिए भने अमेरिकाले डिसेम्बरमा । अमेरिकाले विद्रोहीलाई आर्थिक र हतियार सहयोग जारी राख्यो ।
फेब्रुअरी २०१३ मा अमेरिकी विदेशमन्त्री जोन केरीले सिरियाको भ्रमण गरेर प्रतिपक्षी सिरियाली स्वतन्त्रता सेनालाई ६० मिलियन डलर सहयोग दिने प्रतिबद्धता जनाए । उनले यो हतियारका रूपमा नभई औषधि, खाद्यान्न र सुरक्षा पूर्वाधार विकासमा हुने बताएका थिए । मार्चमा प्रतिपक्षी गठबन्धनले घसान हिट्टोलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा चयन गर्‍यो । हिट्टो सिरियामा जन्मिएका अमेरिकी थिए ।
प्रधानमन्त्री चुनिएपछि उनी टर्कीको सीमामा आएर विद्रोहीलाई साथ दिन थाले । उनले मन्त्रिपरिषद् गठनको जिम्मेवारी पाएका थिए । विद्रोही समूहका धेरैले हिट्टोको चयनको विरोध गरे । गठबन्धनका अध्यक्ष शेख आफैंले समेत राजीनामा दिए । जसले प्रतिपक्षी गठबन्धन टिक्न सक्ला कि नसक्ला भन्ने चिन्ता पश्चिमी मुलुकहरूलाई पर्न थाल्यो । विद्रोहीभित्रै विवादका बीच मार्चमा भएको अरब लिगको बैठकमा शेखले सिरियाको प्रतिनिधित्व गरे ।
अप्रिल २०१३ मा अल कायदा सँग जोडिएको अतिवादी समूह इस्लामिक स्टेट अफ इराक एन्ड सिरिया (आईएसआईएस) को जन्म भयो । विदेशबाट आएका जिहादीहरूले यो समूहलाई बलियो बनाउँदै लगे । यो समूहले विद्रोहीको कब्जामा रहेका सिरियाका उत्तरी भूभाग कब्जा गर्दै गयो । आईएसआईएस जन्मनुको एउटा मुख्य कारण सिरियाका विद्रोही समूहबीचको फाटो र तिनमा अतिवादीहरू हाबी हुँदै जानु पनि एक थियो ।
सेक्टेम्बर २०१३ मा ११ वटा विद्रोही समूहले गठबन्धनलाई आफूहरूले नचिन्ने बताएका थिए । उनीहरूले पनि मुसलमान सरिया कानुनलाई नै अघि बढाउने घोषणा गरे । त्यसले आईएसआईएसलाई फैलिन मद्दत गर्‍यो ।
रासायनिक हतियारको राज
अप्रिल २०१३ मा इजराइलका एक गुप्तचर विश्लेषकले असदले रासायनिक हतियार प्रयोग गरेको दाबी गरे । उनले आफूसँग यसका प्रमाण भएको बताएका थिए । उनलाई पछ्याउँदै फ्रान्स र बेलायतले पनि विद्रोहीले नेतृत्व गरेका दमास्कस, एलेप्पो र होम्समा असदले रासायनिक हतियार प्रयोग गरेको आरोप लगाए । अमेरिकाले सुरुमा इजराइली दाबीबाट आफूलाई टाढै राख्यो ।
सद्दाम हुसेनले रासायनिक हतियार बनाएको खबरका आधारमा आक्रमण गरेको अमेरिकाले सिरियाको विषयमा भने पहिले आफू विश्वस्त हुन चाह्यो । असदले सानो मात्रामा भए पनि रासायनिक हतियार प्रयोग गरेको प्रमाणित भएपछि भने अमेरिकाले विद्रोहीलाई दिने सैन्य सहयोग बढायो । तर, विद्रोहीले मागजस्तो हवाई हतियार भने प्रदान गरेन । इजराइलले भने दमास्कसलाई ताकेर क्षेप्यास्त्र हान्यो । उसले लेबनानी हिज्बुलाहलाई सिरियाले थप हतियार उपलब्ध नगराओस् भन्नका लागि उसको सैन्य भण्डारणमा क्षेप्यास्त्र हानेको गर्‍यो ।
अगस्ट २०१३ मा प्रतिपक्षले असद सरकारले रासायनिक हतियार प्रयोग गरी आक्रमण गरेको आरोप लगायो । विद्रोहीले सार्वजनिक गरका तस्बिरहरूमा मुखबाट फिज निकालेर निधन भएका मानिसहरू देखिन्थे । रासायनिक हतियारबाट १ हजारभन्दा बढी मानिस मारिएको विद्रोहीको दाबी थियो । रासायनिक हतियारको प्रयोगलाई अमेरिकासहित अरू मुलुकले अमानवीय घटनाका रूपमा लिए । विद्रोहीले आरोप लगाएको घटना संयुक्त राष्ट्रसंघीय टोली रासायनिक हतियार निरीक्षण गर्न आएकै बेला भएको थियो । टोलीले घटनास्थलाबाट नमुनाहरू संकलन गर्‍यो ।
रासायनिक हतियार प्रयोग भएको पाइएपछि अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामाले सीमित आक्रमण गरी सिरियाको मुख्य सैन्य शक्तिलाई समाप्त गर्ने रणनीति अघि सारे । सुरक्षा परिषद्मा चीन र रुसले समर्थन नगर्ने भएकाले उनले यस्तो प्रस्ताव अघि बढाएका थिए । त्यसका लागि उनले संसदीय अनुमोदन खोजे । ओबामाको योजनालाई फ्रान्स र बेलायतले समेत समर्थन गरेका थिए । तर, बेलायती प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनले संसद्बाट यो प्रस्ताव पारित गराउन सकेनन् ।
ओबामालाई पनि धेरैले कूटनीतिक तवरबाटै समस्या समाधान गर्ने सुझाव दिए । त्यसैलाई पछ्याउँदै अमेरिकाले राखेको प्रस्तावमा रुसले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनायो । रुसको प्रतिबद्धतापछि सिरियाले आफूसँग रासायनिक हतियार भएको स्विकार्न बाध्य भयो । राष्ट्रसंघको अनुगमनमा सिरियाले सबै रासायनिक हतियार नष्ट गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्यो ।
गृहयुद्धबीच जुन ३, २०१४ मा असद सरकारले राष्ट्रपति निर्वाचन गर्‍यो । ८९ प्रतिशत भोट ल्याएर असद विजयी भएको घोषणा गरियो । सरकारी नियन्त्रण भएको स्थानमा मात्र भएको मतदानलाई विद्रोही र प्रतिपक्षले बहिष्कार गरेका थिए । ओबामासहित पश्चिमाहरूले यो चुनावलाई अवैध भनेका थिए । चुनावपछि असदले आन्दोलनमा सहभागी भई जेल परेकाहरूलाई माफी दिने घोषणा गरे । तिनले जेलबाट मुक्ति पाए पाएनन् भन्नेचाहिं सिरियाले हालसम्म खुलाएको छैन ।
६ वर्षदेखि जारी गृहयुद्धले दोस्रो विश्वयुद्धपछिको सबैभन्दा ठूलो मानवीय संकट निम्त्याएको छ । हालसम्म कसैले पनि यत्तिकै संख्यामा मानिस मारिए भन्न सक्ने स्थिति छैन । धेरैले ५ लाखभन्दा बढी मारिएको तथ्यांक निकालेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सहायता संस्थाहरूका अनुसार करिब १० लाख घाइते र अंगभंग भएका छन् । सिरियाको कुल जनसंख्याको आधा अर्थात् १ करोड २० लाखभन्दा बढी मानिसले घर छाडेर ज्यान जोगाउन हिंडेका छन् ।
छिमेकी मुलुकहरू लेबनान, टर्की, इराकमा मात्र होइन, सिरियाली शरणार्थीहरू युरोप र अमेरिकासम्म पुगेका छन् । युरोपेली संघमा समेत सिरियाली शरणार्थीको विषयले बेलाबेला तातो बहस ल्याउने गर्छ । युरोपेली संघबाट बेलायत बाहिरिने विषयमा भएको जनमतसंग्रहमा समेत सिरियाली शरणार्थीले युरोपमा पार्न सक्ने भूमिकाले केही हदसम्म प्रभाव पारेको देखिन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूका अनुसार ५ सिरियाली शरणार्थीमध्ये ४ बालबालिका वा महिला छन् । सिरिया छाडेर बाहिरिएकामध्ये एक प्रतिशतभन्दा पनि कमले मात्र अर्को मुलुकमा स्थायी बसोबास गर्ने अनुमति पाएका छन् । ५० लाखभन्दा बढी सिरियाली शरणार्थी टर्की, लेबनान, जार्डन, इराक र इजिप्टमा मात्र छन् । सिरियामै रहिरहेका १ करोड ३५ लाखभन्दा बढीलाई तत्कालै मानवीय सहायताको जरुरी रहेको छ ।
सिरियाको साम्प्रदायिक संघर्षले गृहयुद्धलाई मलजल गरिरहेको छ । यहाँभित्रका भिन्न–भिन्न समूहबीचको प्रतिस्पर्धा र लडाइँमा बाह्य शक्तिको सहयोगका कारण गृहयुद्धले सबैभन्दा खराब रूप लिएको हो । अल्पसंख्यकहरूले असदको सरकारलाई मन पराउँछन् । असद स्वयं र ‘रुलिङ एलिट’ अल्विट समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् । यो सिया मुसलमानकै एक सम्प्रदाय हो । यो समूहको पकड विशेषगरी सिरियाको सैन्य निकायमा छ ।
सत्तामा यो समूहको कब्जा भए पनि सिरिया भने सुन्नी मुसलमान बहुल मुलुक हो । विद्रोही समूहहरू पनि सुन्नी मुसलमान समूहका छन् । यही सिया–सुन्नीको लडाइँमा अरू मुलुक पनि मिसिन पुगेका छन् । सिया भएकै कारण इरान, इराक र लेवनानको हिज्बुल्लाह समूहले असदलाई सहयोग गरिरहेको छ भने सुन्नी भएकै कारण टर्की, कतार र साउदी अरेबियाले विद्रोहीलाई सहयोग गरिरहेका छन् ।
साम्प्रदायिक लडाइँका बीच विदेशी शक्तिराष्ट्रको पौंठेजोरी खेल्ने थलोसमेत बनेको छ सिरिया । लोकतान्त्रिक शासन स्थापनाका लागि भन्दै अमेरिकी नेतृत्वको पश्चिमा गठबन्धनले सुरुदेखि नै सिरियाली विद्रोहीलाई सहयोग गर्दै आएको छ । त्यही सहयोगबाट बनेको विद्रोही समूहबाटै विकास भएको अतिवादी समूह आईएसआईएसले गर्दा अमेरिकासहित गठबन्धनको निद्रा हराएको छ । आईएसआईएसको गतिविधि बढ्दै गए पनि २०१४ देखि नै अमेरिकाले सिरियामा रहेको यसका केन्द्रहरूमा बम खसालिरहेको छ ।
सिरियामा अमेरिकी आक्रमणको प्रतिउत्तर रुसले पनि दिन सुरु गरेको छ । सेप्टेम्बर २०१५ देखि रुसले पनि सिरियामा हवाई हमला गर्न सुरु गरेको हो । रुसले आईएसआईएसलाई मात्र होइन असद सरकारविरोधी विद्रोहीलाई समेत लक्षित गर्दै आक्रमण गरिरहेको छ । रुसको साथमा इरान छ भने अमेरिकी साथमा टर्की । सिरियाको आन्तरिक लडाइँ अन्तर्राष्ट्रियकरण हुँदा अहिले शक्तिराष्ट्रहरू सिरियामा छद्मयुद्ध लडिरहेका छन् ।
राष्ट्रसंघ र अरू निकायको मध्यस्थतामा पटक–पटक भएका युद्धविराम तोडिएका छन् । सरकार र विद्रोही, साम्प्रदायिक र विश्व शक्तिबीचको छद्म युद्धका शृंखलामा मारिंदै छन् हजारौं निर्दोषहरू । बाँचेर भाग्नेहरूका लागि पनि खुला छैनन्— कसैका ढोकाहरू, एलिजावेथले कवितामा भनेझैं ।
-बिष्णु पोख्रेक /कान्तिपुरबाट
२६ पुष २०७३
नेपाली कांग्रेसको बैठकमा हिन्दुराष्ट्रको प्रस्ताव दर्ता ! खुमबहादुरले उठाए कदम !
महेन्द्रले गर्दा नेपाल भारतमा विलय हुनबाट जोगियो, प्रचण्ड सरकार भैरहे भारतले नेपाल खान्छ
स्याबास रबि ! यो हो तरिका, उठाएको बिषयहरुले कतिको काम गर्दै छ भने अनुगमन हुनै पर्छ
पाकिस्तान र बङलादेशसँगको सिमाना बन्द गर्ने भारतको चेतावनी
भारतीय अदालतद्वारा केजरीवाललाईे गालीबेइज्जती मुद्दामा उपस्थित हाजिर हुन आग्रह
बिपीले भनेका थिए कम्युनिष्टहरुसंग मिल्नु हुदैन तर तिनैसंग मिल्दा कांग्रेसको अवस्था नाजुक भयो
मुलुकमा अतिबादी शक्ति हावी भो-कोईराला
स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबै पार्टीले भाग लिन्छन-थापा
भट्टराईले नयाँशक्ति परित्याग गरे, भट्टराईकै नेतृत्वमा चैत्र १६ गते नयाँ दल गठन हुने (भिडियो रिपोर्ट)
३ ठुला पार्टीहरू नेपालको ईतिहासमा देश बेचुवा पार्टीका रुपमा नाम अंकित गरेरै अमर हुने भए
गायक रामकृष्ण ढकाल यसो भन्छन ”हाम्रो दिनहुँ झगडा पर्छ” (भिडियो)
गहुँको बीउ र माछामा आत्मनिर्भर बन्दै
© 2017 स्वदेश नेपाल Designed by appharoo